မဟာဘုတ်နည်းဖြင့် အမည်ပေးခြင်း Tin Hlaing Oo(Thayet) — Steemkr
မဟာဘုတ်နည်းဖြင့် အမည်ပေးခြင်း Tin Hlaing Oo(Thayet)
tinhlaingoo61 in myanmar
မြန်မာစတီးမစ်မိတ်ဆွေများ ကျက်သရေမင်္ဂလာအပေါင်နှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ….
အမည်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောရန်တစ်ခုရှိပါသေးသည်။ အမည်တွင် စာလုံး အရေအတွက် မည်မျှပင်ရှိပါစေ နာမည်အရင်းလုံး နှင့် နောက်ဆုံးအလုံးသာ အဓိက ဖြစ်ပါသည်။ နာမည်အရင်းလုံး သည် အတ္တ (မိမိ)အတွက် ဖြစ်၍ နောက်ဆုံး စကားလုံး သည် ပရ(အိမ်ထောင်ဖက်အတွက်)ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မိတ်၊ ရန်၊ ဥဒါသိန် တို့ကိုလည်း သိရှိနေရန်လိုအပ်ပါသည်။
(၂) ပက္ခ အမည်
သဟဇ အမည်ရနိုင်သော အတွဲများကို အောက်မှာ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပုတိ နှင့် အထွန်း အိမ်
အထွန်း နှင့် ပုတိ အိမ်
ဘင်္ဂ နှင့် ဘင်္ဂ အိမ်
သိုက် နှင့် ရာဇ အိမ်
ရာဇ နှင့် သိုက်အိမ်
အခုဖေါ်ပြခဲ့သည့် အိမ်များမှ ဂြိုလ်များကို တွဲလျှက် နာမည်မှည့်ပါက ပက္ခ အမည်ဟုခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ အတ္တ နှင့် ပရ ရန်ဖက်ဖြစ်ခဲ့လျှင် ရန်ဖြစ်ခဲ့လျှင် အိမ်တွင်းရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဆင်းရဲစရာများကြုံတွေ့ရ မည်ဖြစ် ပါသည်။ မိမိလိုချင်သောဘဝကို ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါပေ။
အတ္တနှင့် ပရ မိတ်ဂြိုလ်ဖြစ်လျှင် အဆိုးသက်သာပါလိမ့်မည်။ ရုပ်နှင့် အမည် မကိုက်ညီလျှင် အိမ်ထောင်ပျက်ခြင်း၊ လူကြီးများကခွဲခြင်း၊ အိမ်ထောင်ရေးဖေါက်ပြန် ခြင်းများကိုကြုံတွေ့ရမည်။ သေချာသည်မှာ ပက္ခမိသော အမည်များမှာ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေမှုအားနည်းခြင်းပဲ ဖြစ်ပါသည်။
(၄) ဥပဒိ အမည်
အဓိပတိ နှင့် ရာဇ အိမ်
ရာဇ နှင့် အဓိပတိ အိမ်
ဤနာမည် အမျိုးအစားတွင် အတ္တ နှင့် ပရသည် ရန်ဂြိုလ်လည်းဖြစ်မည် ပါပ လည်းဖြစ်မည်ဆိုလျှင် အသက်ဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရသည်အထိ ဥပဒ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူတပါး၏ လုပ်ကြံခံရသည်မျိုး၊ အရွယ်မတိုင်မီ အန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရသည်မျိုး၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသည်မျိုး ကြုံတွေ့ရ တတ်သည်။
သောမဂြိုလ်နှင့်မှည့်လျှင် သူတပါးကြောင့်ဥပဒ်ကြုံရတတ်သည်။ မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ ဥပတိနာမည်မျိုးကို မှည့်ခေါ်ခဲ့လျှင် သူတပါး၏ ဒုက္ခပေးခြင်းမျိုးကို ခံရ တတ်ပါသည်။
ကျန်ရှိနေသော ဆန့်ကျင်အမည်နှင့်အာမေတိတ် အမည်များကို ဆက်လက်တင်ပြ ပါမည်။
MSC No. 069
Acknowledgment, Manually Written.
Thank you for warning to manually written this post.Please make sure to study astrology.
ပေးပြီးသား အမည် မကောင်းတာကို မပြောင်းဘဲ ကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ ဆြာ
ဆာတင်ပို့စ်မတင်သေးပဲ discord မှာသွားရှင်းပေးပါ